China Four Shaft Shredder (RDF Shredder) ụlọ ọrụ na -emepụta | Otu Opps
RDF na -ere ọkụ, gụnyere plastik, akwụkwọ, osisi, akpụkpọ anụ, biomass dị iche iche, wdg sitere na mkpofu ụlọ, ihe mkpofu ụlọ ọrụ ma ọ bụ ihe ubi, RDF, shredder nwere ike ịwụnye ụdị RDF niile n'ime obere iberibe, nke dabara adaba maka imepụta ọkụ ma ọ bụ ciment. ụlọ ọrụ.
Dabere n'ụdị RDF na nha urughuru mgbe achisasịchara, enwere ike họrọ ụdị shredders dị iche iche.
Ọpụpụ mmiri maka akụrụngwa adịghị mma
Naanị ma ọ bụrụ na enwere okwute siri ike, ihe, igwe ma ọ bụ akụrụngwa siri ike ịkpụ, enwere ike mepee ọdụ ụgbọ mmiri na-akpaghị aka iji kpochapụ ihe adịghị mma site na ịtụgharị rollers abụọ ahụ, ewezuga ọdụ ụgbọ mmiri a nwere ike iji rụọ ọrụ.
Ụlọ na -egbuchapu ihe
Ụzọ abụọ ndị ọzọ na -emeghere imewe maka ụlọ nke shredder na nkeji nke arụnyere na mpụga ga -eme ka maintenace ahụ dị mfe. Mmiri mmiri na uzuzu ga -emetọ mmụba ma metụta oge ọrụ. Na efere na-ebugharị ebugharị nke ihe NM550 ga-emesi obi ike na mgbochi mgbochi na iyi nke shredder.
A na -eji ụdị alloy a na -eji eme ihe iji mee ka esemokwu na ike sie ike. A na-agbado akwa tungsten carbide nke dị n'elu oghere ahụ, ogwe static ahụ nwere ọrụ nke mkpuchi mkpuchi iji zere eriri ma ọ bụ akwa ọ bụla iji kechie ogwe osisi ahụ wee mebie shredder. A na -etinye efere mmịfe ntuziaka ka ọ bụrụ ndọtị nke isi isi na mma static ga -ejikwa nha nke akụrụngwa.
Sistemụ ịnya ụgbọ ala ekewara ekewa ga -arụ ọrụ nke ọma ụzọ abụọ ntụgharị nke rola. Ụzọ ntụgharị a ga -esi mebie akụrụngwa.
Nkewa nke mma.
Enwere ike kenye mma dị ka usoro L, V, S, X dabere na akụrụngwa dị iche iche. A na -eji ụdị oke dị iche iche iji zere ịkwanye na akwa akwa maka akụrụngwa, na akụrụngwa agaghị agbaji oge niile.
Ihe maka mma nwere ike ịbụ ụdị abụọ: Otu bụ iyi akwa HRADOX mbubata ma ọ bụ WNM mere na china. Ihe dị iche iche ga -adị iche n'ụdị mma dị iche iche, na oche nke mma nwere ike ibughari na enwere ike ịgbado oche ahụ na rolle, ụzọ abụọ ka emebere maka maintenace dị mfe.
Oche nke mma
A na -etinye oche a na -ebuli elu nke mma dịka ntụtụ dị na uzo wee kpọchie mkpọchi ya. Yabụ na izi ezi dị elu ma enwere ike iji ya rụọ ọrụ dị arọ, mma dị mfe iji dochie anya maintenace.
Ụdị dịgasị iche iche nke moto hydraulic na -agbanwe agbanwe ga -emezu arịrịọ nke nnukwu ọsọ na nnukwu torque. Onye nrụpụta na -enweghị gia ga -azọpụta ohere na ọnụ ahịa ya. Sistemụ pụrụ iche ga-agbatị oge ọrụ nke shredder na a ga-ekwenye na mmalite mmalite nke obere oge ntụgharị. Mmepụta nke torque ga -abawanye site na mgbali nrụgide dị n'akụkụ abụọ nke moto hydraulic ma na -abawanye site na -ebuli ikike mwepụ nke moto na -agbanwe agbanwe.
model SW1600 SW1800 NZI 2100
N'ozuzu akụkụ (L × W × H) 5112 × 2260 × 3140mm 6170 × 2668 × 3140mm 4750 × 2520 × 3587mm
Ihapu nha 2700 × 2000mm 2520 × 2150mm 3600 × 1860mm
Ịgba Ọdịdị Dị Elu 3150mm 3150mm 3100mm
Ụlọ na -egbuchapu ihe 1650 × 1080mm 1850 × 1250mm 2750 × 1860mm
Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ 14.8 ～ 16.2 T 21 ～ 22.5 T 35.7 ～ 36.5 T
Tank mmanụ 400L 750L 1000 l
Nrụgide Hydraulic 30 MPa 32 MPa 35 MPa
Ụdị ịnya ụgbọ ala Radial / Axial+Reducer Radial / Axial+Reducer Radial / Axial+Reducer
Igwe ọkụ eletrik 2 × 55 /2 × 75Kw 2 × 75 /2 × 90Kw 2 × 90 /2 × 110Kw
Sistemụ Njikwa Nkwukọrịta PLC+MODBUS Nkwukọrịta PLC+MODBUS Nkwukọrịta PLC+MODBUS
Qty nke cutter 2 2 2
ọsọ nke aro 8-25/ 10-30 10-30 / 12-35 12-35 / 13-40
Qty nke mma 30/20 30/23 35/26
nhapụta nha 80-200 mm ogologo 80-200 mm ogologo 80-200 mm ogologo
Ikike 15-17 T/H 22-23.6T/H 30-35T/H
SW2000 NGW 2400 NKW 2700
25.3 ～ 27.8 T 28.6 ～ 32.3 T 35.7 ～ 36.5 T
750L 1000 l 1000 l
35 MPa 38 MPa 42 MPa
Nkwukọrịta PLC+MODBUS Nkwukọrịta PLC+MODBUS Nkwukọrịta PLC+MODBUS
Ogologo 150-300 mm Ogologo 150-300 mm Ogologo 150-300 mm
N'ozuzu Size (L*W*H) (mm) 3970*2400*1400 5100*3600*3100
Akụkụ ụlọ na -emebi emebi L*W (mm) 1260*1300 2100*1800
Okirikiri Rotary Cutter (mm) Φ430 Φ660
Oghere ọsọ (rpm) 15-25 15-25
Ọkpụkpụ QTY (PC) 30-52pcs 84pcs
Ọkpụrụkpụ cutter (mm) 30-50mm nhọrọ 50mm
Ụgbọ ala (kw) 45KW*2+15KW*2 90KW*2+22KW*2
Akụkụ ahụ na -ama jijiji 30-50mm nhọrọ 30-50mm nhọrọ
Ikike (T/awa) 3-5T/Oge 8-10T/elekere
Previous: Ugboro abụọ aro ịkpụ Shredder
Next: Ihe nkesa magnetik
Igwe mkpuchi China
Granulator , Tree Shredder , Msw mmako , ala Mill , Plastic Granulator , Rdf Mmanụ ,